नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : काष्टमण्डप एयरलाइन्सको विमान कालिकोटमा दुर्घटना, पाइलट दिनेश न्यौपाने र को पाइलट सन्तोष रानाको निधन !
काष्टमण्डप एयरलाइन्सको विमान कालिकोटमा दुर्घटना, पाइलट दिनेश न्यौपाने र को पाइलट सन्तोष रानाको निधन !
काष्टमण्डप एयरलाइन्सको विमान कालिकोटमा दुर्घटना हुँदा पाइलट दिनेश न्यौपाने र को पाइलट सन्तोष रानाको निधन भएको छ । विमानमा समस्या आएपछि चालक दिनेश न्यौपानेले विमानलाई कालिकोट विमानस्थलमा आकश्मिक अवतरण गराउन चाहेका थिए । तर उनको योजना सफल भएन । विमानलाई खेतमै अवतरण गराउनु पर्‍यो । जुम्लाकालागि उडेको काष्टमण्डप एयरको नाइन एन एजेवी विमान आकश्मिक अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेपछि विमान चालक र सहचालकको निधन भएको छ भने अन्य ९ जना यात्रु घाइते भएका छन् ।
- फोटो : कमल शाही